မေး ။ ။ အရှင်ဘုရား
၁။ ယောက်ျားအချင်းချင်း မိန်းမအချင်းချင်း ကျူးလွန်ပြစ်မှားကြလျှင် အပြစ်ရှိပါသလားဘုရား။ ငရဲကျနိုင်ပါသလားဘုရား။
၂။ လူပျိုဘ၀ဖြင့် မကောင်းသည့် မိန်းမများနှင့် ပျော်ပါးလျှင် အပြစ်ရှိပါသလားဘုရား။
၃။ အိမ်ထောင်ရှိပါလျက်နှင့် မကောင်းသည့် မိန်းမများနှင့် ပျော်ပါးလျှင် အပြစ်ရှိပါသလားဘုရား။
(ဇာတံ သရဏ တော ဘယံ)
ကြောက်လို့ ကိုးကွယ်ရာအမျိုးမျိုး မှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကိုးကွယ်ရာအမျိုးမျိုး တို့ ကိုတွေ့ ကြမယ်။ အဲဒီကိုးကွယ်ရာ
တွေက တစ်ခါတစ်ခါ ဘာဖြစ်တတ်သလဲ။ ဘေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ လကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
တစ်ခါပွားရင် တစ်ခါကူးစက်၊ တစ်ခါပွားရင် တစ်ခါစိမ့်ဝင်နဲ့ ပွားဖန်များလာတဲ့အခါ ကူးစက်စိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးမျိုး
ကိုယ့်မှာလည်းကိုယ်အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ် ပြည့်စုံလာပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှကြီးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတယ်ဆိုတာ . . . ဘုရားအကြောင်း စဉ်းစားတာပါပဲ။ ကိုယ်သိထားသလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စဉ်းစားရင် ဘုရားကိုလည်း ပိုကြည်ညို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
တရားအားလုံးကို ဆရာမကူ ကိုယ်ပိုင်ညဏ်ဖြင့် သိသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗုဒ္ဓ ဟုခေါ်သည် ။
သင့်ကို ရိုက်ပုတ် နှင့်ထုတ်ကြပေမယ့် သူတို့ကို မသေစေလိုဘူးဆိုရင် သင့်နှလုံးသားမှာ “မေတ္တာတရား” မသေပါကလား။
( ဘုရားလောင်း သိကြားမင်း )
ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်စက အဘွားအို“ကစ္စာနီ”မှာ မယုံကြည်နိုင်သလို တအံ့တသြဖြစ်သွားသေးတယ်။ ဒါဟာ မဖြစ်ကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း ဇဝေဇ၀ါးတွေးလိုက် မိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ အကြံအဖန် လုပ်လို့ရနိုင်တာ မျိုးမဟုတ်သလို တစ်ရပ်လုံး အုတ်အော်သောင်းတင်း ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်လို့ ဘာမျှ သံသယဖြစ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ တကယ့်အဖြစ်မှန်ပဲ။ ဒီလိုဆိုရင်….
အဘွားအို “ကစ္စာနီ”ဟာ သူချွေးမ သားဖွားတဲ့သတင်းက သံသယဖြစ်စရာမရှိတဲ့ အဖြစ်မှန်ပဲဆိုတာ အတိအကျ သိလာရချိန်မှာတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတို့ကို အရိုအသေ လုပ်ကျွေးရမယ့် “ ဇေဋ္ဌပစာယနတရားနဲ့ သုစရိုက်တရားများ” အပေါ်မှာ သံသယ ဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။
“အမှန်တရားများဟာ တစ်ချိန်က သူတို့ သက်ရှင် ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ငါ့မှာ အရွယ်အိုမုဆိုးမဖြစ်ရပေမယ့် ဘာမှ မချို့တဲ့ခဲ့ဘူး၊ အမိကို အိမ်ဦးနတ်လိုကိုးကွယ် လုပ်ကျွေးတတ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလိမ်မာလေး၊ ရေပူရေချမ်း၊ ယာဂုထမင်းက စပြီး အ၀တ်လျှော်ဖွပ်သည့်အထိ အစစ တာဝန်ကျေတဲ့ သားလိမ္မာရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် အရာရာ ဘာမျှမချို့တဲ့၊ မတောင့်မတ မကြောင်းမကြ လိုအပ်သမျှ အရန်သင့်၊ ဒါတွေဟာ ဒီသုစရိုက်တရားတွေရဲ့ ကျေးဇူးတွေပဲမဟုတ်လား၊
ခုတော့ ကျေးဇူးရှင်တွေ သေကြပြီး၊ တို့ဗြဟ္မဏနွယ်တွေရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ကျေးဇူးရှင်သေခဲ့ရင်.. သူတို့ကို နောက်ဆုံးကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့“ပိဏ္ဍပ်ကျွေး”(ဆွမ်းလွတ်)ပေးရမှာပေါ့”
သူက သုဿာန်ဆီ သွားနေပေမယ့် စိတ်ကတော့ အတိက်ဆီ ပြန်တွေးနေမိတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလို့ နောက်ဆုံးတော့ ယောင်္ကျားသားခမျာ “ အမေပြောတော့ တစ်လ၊ မယားပြောတော့ တစ်ခဏ” ဆိုတဲ့ အစားထဲ ရောက်သွားရရှာပြီး မယား သဘော အတိုင်း လိုက် လျောခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ချွေးမရဲ့ ကြိမ်းမောင်းနှင်ထုတ်တာ ခံရပြီး အဘွားအို“ ကစ္စာနီ” ခမျာ အိုကြီး အိုမ သူတစ်ပါးအိမ်မှာ အိမ်စေအဖြစ် ကပ်ရပ် မှီခိုရင်း အထီးအကျန် ဒုက္ခသည်ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရတော့တယ်။
တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ အဘွားအို အိမ်မှာရှိစဉ်က အမြုံမ ဖြစ်နေတဲ့ချွေးမက အဘွား အိုလည်းမရှိရော သန္ဓေရပြီး သားယောင်္ကျားလေး ဖွားမြင်လာတယ်။ ဗြဟ္မဏ အနွယ်တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အနွယ်ကို ဆက်ခံမည့် သားကောင်း မိခင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ သူဟာ အမျိုး ရဲ့ သခင်အဖြစ် အစစ စိုးပိုင်လာခဲ့တော့တယ်။ လင်ယောင်္ကျားအပေါ်မှာ လည်း ပြော အား ပိုရှိလာတာပေါ့။
“ အရင်က ယုတ်မာတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုမကြီးကြောင့် အမြုံ ဖြစ်နေတာ၊ အခု သူလည်းမရှိရော အမျိုးကိုဆက်ခံမည့် သားရတာရပြီ” ပေါ့။
ဒါကြောင့် အဘွားအို “ကစ္စာနီ”က တရားကို သေပြီလို့ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး ကျေးဇူးရှင် တရားအသေအတွက် ပိဏ္ဍပ်ကျွေး(ဆွမ်းသွပ်) ဖို့ သုသာန်ဘက် ထွက်လာခဲ့တာ။
သုသာန်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ လူသေရဲ့ ဦးခေါင်းခွံသုံးခုကို ဖိုခုံလောက်လုပ်ပြီး မီးပျိုးတယ်။ ပြီးတော့ ဗြဟ္မဏတို့ထုံးစံအတိုင်း ချောင်းထဲသွားပြီး ဆံပင်ကိုလျှော်၊ အ၀တ်ဖြူကိုရုံပြီးမှ ဆံပင်ကို ခြောက်အောင်ခါပြီး ကျောဘက်မှာ ဖားလားချထားရင်း နှမ်းထမင်းချက်ဖို့ ပြင်ဆင် ပါတော့တယ်။
“ပုဏ္ဏားကြီး၊ ဒီကိစ္စမှာ ကျွန်ုပ် ဘာမျှသံသယဖြစ်စရာ မလိုတော့ဘူး၊ အသေအချာ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ အကျွန်ုပ်ကို အိမ်ပေါ်မှာတင်ထားပြီး လုပ်ကျွေးနေစဉ်က ချွေးမဟာ သားသမီးမထွန်းကားတဲ့ အမြုံမ ဖြစ်နေခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်ကို ရိုက်ပုတ်နှင်ထုတ်လိုက် ပြီးတော့မှ သားကို ဖွားဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒီလို ယုတ်မာတဲ့ မိန်းမက အမျိုးကို အစိုးရသူ ဖြစ် သွားပြီး မိခင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်ုပ်က အနှင်ခံဘ၀ နဲ့ အထီးကျန်ဖြစ်ရတယ်၊ ဒါဟာ တရား သေလို့ပဲ မဟုတ်ပါလား”
“အို ကစ္စာနီအရှင်မ၊ ကျွနိုပ် သုစရိုက်တရာတွေကြောင့် သိကြားမင်းဖြစ်လာရသူပါ၊ ကျွန်ုပ်မသေသေးပါဘူး၊ အခုလာခဲ့တာဟာ သင့်ကို အကျိုးဆောင်ပေးဖို့ပါပဲ၊ သင့်ချွေးမဟာ သင့်ကို ရိုက်ပုတ်နှင်ထုတ်ပြီးမှ သားကို ဖွားမြင်ပြီး အိမ်ကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ် ခွင့်ရသွားတာ ဖြစ်ခဲ့လျှင် သူသားနှင့်အတူ ပြာကျသွားအောင် ကျွန်ုပ် ပြုပေးပါမယ်။”
“အို သိကြားမင်း၊ ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ၊ ဒီအကြံဟာ အလွန်စက်ဆုတ်စရာ ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မြေး မသေအောင် ပြုရမယ်၊ အသင် သိကြားမင်းဟာ ကျွန်ုပ် အကျိုးအတွက် ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာမှန်ရင် ကျွန်ုပ်နဲ့အတူ သား၊ ချွေးမ၊ မြေးတို့ အားလုံး အတူတကွ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အိမ်မှာအတူနေရအောင်သာပြုပါ”
“အို ကစ္စာနီရှင်မ၊ သင့်ကို ရိုက်ပုတ်နှင်ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ငယ်ရွယ်သူတွေကို မသေစေလိုဘူးဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ မေတ္တာတရားကို မစွန့်လွှတ်ဘူးဆိုရင် သင့်နှလုံးသားမှာ မေတ္တာတရားဟာ မသေသေးပါကလား၊ ဒီလိုဖြစ်ရင် တရားသေကို ရည်မှန်းပြီး ဆွမ်းသွတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ သင့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ပါတော့၊ သင့်ဆန္ဒပြည့်ဝအောင် ကျွန်ုပ် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်၊ မိသား စုတွေ ပြန်လည် ပေါင်းဆုံကြဖို့သာ ပြင်ပါတော့”
သိကြားမင်းက သူ့ကတိအတိုင်း သားနဲ့ချွေးမတို့ကို သံဝေဂရအောင် ပြောဆို ဆုံးမလိုက်တာကြောင့် မိခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို ပြန်လည်အောက်မေ့ပြီး ကလေးငယ်ကို ပွေ့ချီရင်း မိခင်အရှာထွက်ကြတယ်။